Iibheriya zeLifa leIberia | Ukutya kukaNutri
Iicroquettes zelifa lemveli laseIberia
NutriDiet | | Iiresiphi ezisempilweni
IiCroquettes zihlala zikhona kwezo zibheno ongenakukuphosa. Kungenxa yokuba bahlala benoloyiso kwaye uninzi lwabo luyayithanda. Bavuma zonke iintlobo zezithako kodwa namhlanje, sibheja kwi Ilifa laseIberia ngohlobo lwe ham esemgangathweni ophezulu. Oko kongeza izibonelelo ezininzi zokuqwalaselwa.
Ke ukuba sidibanisa ham kunye neekroyte, Siza kuba nokudibana okungaphezulu kokuqhuma kwitafile yethu. Ngenxa yokuba i-whim enje singazinika yona. Ngaba ufuna ukuphumelela phambi kweendwendwe zakho? Emva koko ungathandabuzi ukulandela amanyathelo esikubonisa wona apha.
1 Izithako zeekhabhathi zelifa leIberia zabantu aba-4
3 Izibonelelo zeham ye-Iberia ham
Izithako zeekhabhathi zelifa leIberia zabantu aba-4
Iigram ezingama-50 zeoyile (nangona ungayisebenzisa ibhotolo ukuba uyayithanda ngale ndlela)
Iigrama ezingama-75 zomgubo
250 iigrem zeham yaseIberia
Ilitha enye yobisi
Izonka zesonka kunye nomgubo wokunxiba ii croquettes
Las I-croquette kaHam banamalungiselelo alula kakhulu. Kuqala, sibeka ipani emlilweni kunye neoyile okanye ibhotolo kuxhomekeke kwisigqibo osithathileyo. Kuya kufuneka uyifudumeze ioyile encinci okanye ulinde ide ibhotolo inyibilike ngokupheleleyo. Ngeli xesha, uya kongeza itswele ekufuneka usike kakuhle kakhulu. Siza kuyipakisha, ke kuyakufuneka siyishukumise okwemizuzu embalwa.
Xa u-anyanisi efumana ukuchukumisa okungafihliyo, lixesha lokongeza Iham yaseIberiya, esiza kuyisika ibe ziingceba. Ukuba ukhetha enye imveliso efanayo, kuya kufuneka uyazi ukuba Ilifa laseIberia kwinkundla yamaNgesi ineentlobo ezahlukeneyo kunye nencasa ekufuneka uyinandiphe. Kodwa mhlawumbi zokupheka kunye neemenyu zekamva. Okwangoku, siya kuba ne-anyanisi kunye ne-ham epanini, apho siya kufaka khona umgubo kwaye siwupheke malunga nemizuzu engama-6. Into esiyifunayo kukuba umgubo uphulukane nencasa yawo, kodwa yongeza ukungqinelani kwisiphumo.
Emva kwale mizuzu, lixesha lokongeza ubisi kwaye uxhokonxe ngalo lonke ixesha. Siza kuqaphela ukuba ngumphunga njani kwaye siza kongeza kancinane. Xa uvuselela kakuhle, siya kuthintela amaqhuma ekubumbeni. Xa sele sinayo inhlama engancangathi kakhulu kodwa ingakhululwanga ngokupheleleyo, lixesha lokungcamla ityuwa, ukongeza i-nutmeg, gxuma kwakhona kwaye ucime ubushushu. Siza kuyigalela intlama ibe ngumthombo osasazeke kakuhle kwaye siyivumele ipholile. Xa kubanda, siza kuyisa efrijini.
Ungazishiya iiyure ezininzi okanye, yenza oku kulungiselela ebusuku ulinde kude kube lusuku olulandelayo. Ukugqiba isitya, kuya kufuneka sithathe iinxalenye zentlama kwaye senze ibhola kunye nabo okanye, sibanike imilo emide, ngokokukhetha kwakho. Xa unazo, uzidlulisa ngomgubo, iqanda elibethiweyo kunye neesonka. Uzibeka epanini ngeoyile eshushu kwaye ziya kufakwa kwiibhetshi ezincinci, ukuze umphumo ube mhle ngakumbi. Ngoku ungonwabela incasa eyahlukileyo!
Izibonelelo zeham ye-Iberia ham
El Ilifa laseIberia iHercercor Unokukhetha ukuzama ezinye iimveliso ezikumgangatho ophezulu. Kodwa namhlanje sigxila kwiham, eyinto ebalulekileyo kubomi bethu. Kule meko, yongezwa kwenye yeesitya okanye i-tapas ngokugqwesa, baphinda benze esinye sezidlo ezilungileyo. Kodwa ziziphi izibonelelo zayo ezikhulu?
Kufuneka kuthiwe amafutha ehagu yaseIberia ane-oleic acid eninzi kunamanye. Oku kwenza umphumo weham yakho ngaphezulu luncedo kwi-cholesterol. Ukwenza, ke ngoko, kulungile ukuphakama. Ukuyisebenzisa amaxesha ambalwa ngeveki okanye kathathu nangamanani amancinci, kuluncedo ngokupheleleyo kwigalelo lethu kwimpilo yethu. Ukongeza, ineeproteni kwaye ngaphandle kokulibala iivithamini B1, B6, B12 kunye no-E. Izimbiwa zikwakhona kwilifa lemveli laseIberia apho siqaqambisa khona intsimbi kunye nobhedu okanye ikhalsiyam kunye nezinc. Ngaba usazibuza ukuba uza kuyazisa kwindlela otya ngayo okanye hayi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukutya kukaNutri » Ukutya » Iiresiphi ezisempilweni » Iicroquettes zelifa lemveli laseIberia
Ukunciphisa umzimba ngokutya irayisi yenkukhu